Hena Ne Yesu Kristo? | Asɛmpa
1. Ɛyɛɛ dɛn na Yesu baa nkwa mu?
Su ahorow a Yesu wɔ bɛn na ɛmaa nkurɔfo tumi bɛn no?—MATEO 11:29; MARKO 10:13-16.
Onipa biara nni hɔ a ɔte sɛ Yesu, efisɛ ɔtenaa soro sɛ honhom abɔde ansa na wɔrewo no wɔ asase so. (Yohane 8:23) Yesu ne Onyankopɔn abɔde a odi kan, na ɔka ho bi na wɔbɔɔ nneɛma foforo a aka nyinaa. Ɔno nkutoo na Yehowa bɔɔ no tẽẽ, enti ɛfata sɛ wɔfrɛ no Onyankopɔn Ba a “ɔwoo no koro.” (Yohane 1:14) Wɔsan frɛ Yesu “Asɛm no,” efisɛ ɔkasa ma Onyankopɔn.​—Kenkan Mmebusɛm 8:22, 23, 30; Kolosefo 1:15, 16.
2. Dɛn nti na Yesu baa asase so?
Onyankopɔn somaa ne Ba no baa asase so denam ne nkwa a oyi fii soro bɛhyɛɛ Yudani bea bi a na ɔyɛ ɔbaabun a ne din de Maria awotwaa mu no so. Enti Yesu annya agya a ɔyɛ onipa. (Luka 1:30-35) Yesu baa asase so sɛ (1) ɔrebɛkyerɛkyerɛ Onyankopɔn ho nokwasɛm, (2) ɔrebɛyɛ nhwɛso ama yɛahu sɛnea yɛbɛyɛ Onyankopɔn apɛde bere mpo a yɛrehyia nsɛnnennen, ne (3) sɛ ɔde ne nkwa a ɛyɛ pɛ no bɛma sɛ “agyede.”​—Kenkan Mateo 20:28.
3. Dɛn nti na yehia agyede?
Agyede yɛ sika anaa biribi a wotua de gye obi a nkurɔfo pɛ sɛ wokum no. (Exodus 21:29, 30) Ná owu, nkwakoraabɔ ne mmerewabɔ nka Onyankopɔn atirimpɔw a ɔwɔ ma nnipa no ho. Yɛyɛ dɛn hu saa? Onyankopɔn ka kyerɛɛ onipa a odi kan a ɔne Adam no sɛ sɛ ɔyɛ nea Bible frɛ no “bɔne” a, obewu. Enti sɛ Adam anyɛ bɔne a, anka ɔrenwu da. (Genesis 2:16, 17; 5:5) Sɛnea Bible kyerɛ no, ɛnam Adam so na owu “baa” nnipa nyinaa so. Enti, Adam de bɔne ne ɛho akatua a ɛne owu no gyaw n’asefo nyinaa. Ɛno nti, yehia agyede a ebetumi ayi yɛn afi owu afobu a yenya fii Adam hɔ no mu.​—Kenkan Romafo 5:12; 6:23.
Hena na na obetumi atua agyede no de agye yɛn afi owu mu? Sɛ yewu a, yetua yɛn ankasa bɔne nkutoo ho ka. Onipa a ɔnyɛ pɛ biara nni hɔ a obetumi atua afoforo bɔne ho ka ama wɔn.​—Kenkan Dwom 49:7-9.
4. Dɛn nti na Yesu wui?
Yesu nte sɛ yɛn, ná ɔyɛ pɛ. Enti, na ɛho nhia sɛ owu wɔ ne bɔne ho, efisɛ wanyɛ bɔne biara da. Mmom no, afoforo bɔne nti na Yesu wui. Onyankopɔn somaa ne Ba no ma obewu maa yɛn de kyerɛe sɛ ɔwɔ ɔdɔ soronko ma nnipa. Yesu san daa ɔdɔ adi kyerɛɛ yɛn denam osetie a ɔyɛ maa n’Agya, ne ne nkwa a yɛn bɔne nti ɔde bɔɔ afɔre maa yɛn no so.​—Kenkan Yohane 3:16; Romafo 5:18, 19.
5. Dɛn na Yesu reyɛ seesei?
Bere a na Yesu wɔ asase so no, ɔsaa yare, onyanee awufo, na ogyee ebinom fii amanehunu mu. Ɔnam saa a ɔyɛe so kyerɛɛ nea ɔbɛyɛ ama nnipa a wɔn aso yɛ mmerɛw nyinaa daakye. (Mateo 15:30, 31; Yohane 5:28) Bere a Yesu wui no, Onyankopɔn nyanee no baa nkwa mu bio sɛ honhom abɔde. (1 Petro 3:18) Afei Yesu tenaa Onyankopɔn nsa nifa so twɛn kosii sɛ Yehowa maa no tumi sɛ onni Hene wɔ asase nyinaa so. (Hebrifo 10:12, 13) Seesei Yesu redi Hene wɔ soro, na n’akyidifo a wɔwɔ asase so reka asɛmpa no wɔ wiase nyinaa.​—Kenkan Daniel 7:13, 14; Mateo 24:14.
Ɛrenkyɛ, Yesu de tumi a ɔwɔ sɛ Ɔhene no bedi dwuma de ayi amanehunu nyinaa ne wɔn a wɔde ba no afi hɔ. Wɔn a wɔyɛ osetie de kyerɛ sɛ wogye Yesu di no nyinaa bɛtena paradise wɔ asase so.​—Kenkan Dwom 37:9-11.
Onyankopɔn Akyɛde a Ɛso Paa ne Agyede No
Dɛn ne agyede no? Wobɛyɛ dɛn anya so mfaso?